ပုံဆွဲစကေး 1: 0.5 1 1.5234567 8910
အာကာသ width ကို X
X - အာကာသ width ကို
Y - အခန်းရဲ့အရှည်
ထိုအချက်များမှာအခန်း၏လေးထောင့်ကနေအမြင့်ခြားနားချက်၏တိုင်းတာခြင်းထွက်သယ် A, B, C, D.
ကိုယ်ပိုင်-level ကြမ်းပြင်၏နိမ့်ဆုံးအထူသတ်မှတ်မည်။ ဒီအရွယ်အစားကိုအလိုအလျောက်အခန်း၏နိမ့်ဆုံးအမှတ်ဖို့လျှောက်ထားပါလိမ့်မည်။
ရလဒ်အတိုင်း, ကုဗမီတာအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုပမာဏနှင့်အခန်း၏ထောင့်မှာအမြင့် ထား. တွက်ချက်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ထောင့်မှာအမြင့်ကွာခြားချက်အပေါ်အခြေခံပြီး Self-level ကြမ်းပြင်များအတွက်ပစ္စည်းပမာဏကိုစဉ်းစား။
သူသည်သင်၏အစိတ်အပိုင်းအပေါ်မည်သည့်အပိုအားထုတ်မှုမပါဘဲတစ်ဦးပြားချပ်ချပ်နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့မျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည့်အထူး screed, ထို Self-level ကြမ်းပြင်၏အဓိကအားသာချက်။ ထိုကဲ့သို့သောကြမ်းပြင်ယနေ့အထူးလူကြိုက်များရရှိခဲ့ကြပါပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကြမ်းပြင်လွတ်လပ်စွာဖွစျနိုငျသွန်းလောင်း။ လိုအပ်ကြောင်းအားလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသင်အမြင်လိုစိတျထဲမှာဖြည့်ရန်အဘို့အပစ္စည်းများ၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုတွက်ချက်နိုင်ပါလိမ့်မည်, ထောင့်တွင်၎င်း၏အရပ်အမြင့်, အခန်းရဲ့အရှည်နဲ့ width ကိုသိ၏အဖြစ်ဝစွာအလွှာ၏နိမ့်ဆုံးအထူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
1. အကိုလေ့လာခြင်း၏မျက်နှာပြင်ချုပ်ရိုးသို့မဟုတ်ကွာဟချက်မပါဘဲ, တူညီသော။
2. Self-level ကြမ်းပြင်၏ဘဝ 40-50 နှစ်ကြာမှကြွလာ။
stack Filler ကြမ်းပြင်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဤမျှလောက်များစွာသောအထူးကုမသုံးပဲကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ဖို့လိုလားကြပါတယ်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်အချို့သောပရိယာယ်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်သင်အခန်းပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ကြမ်းပြင်ကိုတင်သောစတင်မီ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဟောင်းအခင်း, baseboards နှင့်တံခါးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ကြမ်းပြင်မျက်နှာပြင်ညှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအထူးသဲစက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးဖြီးသုံးပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဒါကိုတော့ရှိပါတယ်လျှင်, သူတို့တစ်တွေတြိဂံခြစ်သုံးပြီးထုတ်ဖော်။
သင်သစ်သားကြမ်းပြင်၏ထိပ်ပေါ်တွင် Filler တင်. သွားကြသည်လျှင်, အထူး Pre-ဇယားကွက်နှင့်အတူဖြည့်ရဦးမည်ဆိုတာသတိရပါ။
ထို့နောကျထောင့်စောင်းကြမ်းပြင် slats သုံးပြီးတိုင်းတာသည်။ နံရံပေါ်ဤအကြောင်းတိုင်းတာချက်အရကြမ်းပြင်၏အမြင့်သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သည့်ရန်အမှတ်အသားလုပ်လေ၏။ ဒီအမြင့်, ပေါင်း 2.5 စင်တီမီတာမှာနံရံအင်္ဂတေနုနှင့်အခြားပြီးပစ္စည်းများမှသန့်ရှင်းနေကြပါတယ်။
တဖန်, ကြမ်းပြင်အထူးအမှုန့်နှင့်အတူသန့်စင်ခြင်းနှင့် degreased ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့အက်ကြောင်းနှင့် crevices လူးကြမ်းပြင် aligned ဖြေရှင်းနည်း, မူမမှန်ချော။ ထို့နောက်ကြမ်းပြင်ရစေတယ်ရပါမည်။ နှင့်ဤကြိုတင်ပြင်ဆင်အဆင့်မှာပြီးစီးခဲ့သည်။ သငျသညျကြမ်းပြင်ကိုတင်သောစတင်နိုင်ပါသည်။
ကြမ်းပြင် Filler တင်သော
အထုပ်လမ်းညွန်သည်နှင့်အညီအဖြေတစ်ခုပြင်ဆင်ပါ။ ဖြေရှင်းချက်ခဲ့ယူနီဖောင်းစေရန်, ချက်ချင်းအပေါငျးတို့သရေကန်ဖြည့်ကြဘူး။ ဒီကကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါစေသော။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်သော့ပွငျ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကအထူး nozzle နဲ့လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပွုဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်သာအခါ, အထဲတွင်ကျန်ရှိသောရေသွန်းလောင်း။
လိင်အဝင်ဝကနေဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်ကနေဝုဏ်အတွင်းရန်, တံခါးဦးတည်သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအရောအနှောတဲ့ကျစ်ကြိတ်စက်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်အခုလဲပြီးနောက်စီဝေမျှအတွက်သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်သို့ဝငျနှင့်တစ်ဦးယူနီဖောင်းအပေါ်ယံပိုင်းပေးခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါလေကြောင်းပူဖောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးသည်။
အချိန်နောက်ထပ်ကာလမှရှိရမည်မှလောင်းကျော်ကို 10 မိနစ်မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကြမ်းပြင်ခြောက်သွေ့စဉ်အတွင်းနှင့်ကဖြေရှင်းချက်များ၏အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်. 3-6 နာရီနှင့်အခန်းအပူချိန်အပြောင်းအလဲများအတွက်မူကြမ်းရှောင်ကြဉ်ပါ။